Somaliland Oo Ka Hadashay Dhalinyarro Ay Dawladda Qadar Askarinimo U Qoranayso | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Somaliland Oo Ka Hadashay Dhalinyarro Ay Dawladda Qadar Askarinimo U Qoranayso
Published on February 11, 2018 by Khadar A Muse (Hargeisa Office) · No Comments
Hargaysa (SDWO): Dawladda jamhuuriyadda Somaliland ayaa arrin aan munaasib ahayn ku tilmaantay qorshe ay dawladda Qadar ay dhalinyarro reer Somaliland ugu qoranayaan askarinimo.
Iyadoo ay jirtay labaddii bilood ee ina dhaafay ay magaalooyinka Somaliland gaar ahaana caasimadda Hargaysa ka socotay qorshe ay dawladda Qadar ku qoranayso askarinimo boqolaal dhalinyarro ah si ay u koriso tiradda ciidamadeedda.
Wasiirka wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha bulshadda Somaliland Hinda Jaamac Xirsi, oo maanta warfidiyeenadda la hadashay ayaa sheegtay in arrintaasi ay tahay mid aan loo baahnan in dalka Qadar dhalinyarada Somaliland askarimo u qaataan.
Waxaanay u soo jeedisay dhalinyarada Somaliland in haddii ay askarinimo doonayaan ay is qoraan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland, balse aan loo baahnayn in ay dal shisheeye ciidankiisa is qoraan.
Wasiir Hinda Jaamac Xirsi, oo arimahaasi ka hadlaysayna waxay tidhi “Waxaan u arkaa arrin aan munaasib ahayn in dhalinyardeenii askar uu u qorto wadanka Qadar, iyadoo dalkeenii ciidan u baahan yahay, waana qof lunsan, waxaana qaldan waalidiinta ambabixinaysa dhalinyarada.
Waxaanan leeyahay dhalinyaradu haka fiirsato askarinimadaa loo qorayo Qadar, waxaanan u arkaa in ay tahay arrin qaldan, ardayda dhamaysatay waxbarashada ee reer Somaliland waa in ciidanka Somaliland la qoro oo ay ka mid noqdaan”.
Geesta kale wasiir Hinda, waxay sheegtay in cida leh masuuliyadda ah in ay ogaato u jeedadda ka danbaysa dhalinyaradan ay dawladda Qadar qoranayso iyo waxay qaban doonaan in ay tahay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland.
Waxaanay ku dooday in aanay arrintaasi masuuliyadeedda wax shaqo ah ku lahayn wasaaradda shaqadda iyo arrimaha bulshadda.
“Dhalinyaradu dalka ayay dibada uga baxayaan cida xaq u leh inay ogaato muxuu ku salaysan yahay dhalinyaradan Qadar qoranaysaa, waxa aan qabaa in aanay cidiba is waydiin, cida hawshahaas wada.
Waana shaqadii wasaaradda arrimaha dibada, wasaarada shaqada iyo arrimaha bulshadu-na wax shaqo ah oo ay ku leedahay ma jirto arrintaasi” ayay tidhi marwo Hinda Jaamac.
By: Khadar Maxamuud Dhako